Iron boride, oo ah qalab cusub oo superhard iyo superconctacting cusub, ayaa si guul leh loogu soo saaray sheybaarka Gou Iyo kuwa kale oo ka socda Jaamacadda Bayreut. Waa maamule-hawleedkii ugu horreeyay ee uu naqshadeeyo kombuyuutar ka dibna laga sameeyo natiijooyinka xisaabinta.
Daawada birta ah ee 'boron' iyo 'ferric' Miisaanka atomiga ee boron waa 10.81, qaab dhismeedka elektirooniguna waa 1 $ 2p. Cufnaanta macdanta 'crystalline' ee ku saabsan 3.8 boqolkiiba, waxay leedahay hal dhibic oo caadi ah, heerkulkeeda cimilada s 1? teendhada rboron waa 2. 31g / cm3 (20 *) iyo cufnaanta boor amorphous waa 2. 30g / cm3 (20 "C). Melpoint waa 2079", barta karkaraya waa 3660 "C Nidaamka birta boronka, boronboronku wuxuu sameeyaa labo, iskudhaf dhexdhexaad ah oo waliba aad u xasilan heerkulka sare .Fe2b iyo Feb Iyo Feb waxay leedahay laba Noocyada dhalada ah: heerkulka sare iyo heerkulka hooseeya.Magaalooyinka heerkulka birta ee birta warshadaha (10% -20% B) waa 1400-1550C, cufnaanta waa 5. 8-6. 5g / cm3
Qaaciddada loo yaqaan 'FeB' Culeyska kelli ee 66.66 Iron boride, oo ah qalab dhowaan la helay oo superhard ah, ayaa si guul leh loogu soo saaray sheybaarka Gou Iyo kuwa kale oo ka socda Jaamacadda
Bayreut. Waa magaca superconductor-kii ugu horeeyey ee kombuyuutar naqshadeeyo ka dibna laga sameeyo natiijooyinka xisaabinta. Iyo kuwa kale oo ka tirsan Jaamacadda Bayreut. Waa superconductor-kii ugu horreeyay ee kombiyuutarku naqshadeeyo ka dibna laga sameeyo natiijooyinka xisaabta.Superconductor tafatirka Superconductor waa hogaamiye soo bandhiga eber iska caabin ah heerkulka la siiyay. U adkaysiga sifooyinka iyo dhex-dhexaadnimada dhammeystiran waa laba astaamood oo muhiim u ah superconductors.
Heerkulka ay iska caabinta superconductor-ka u beddelayso eber waxa loo yaqaan heer-kulub heer sare ah oo heer sare ah, kaas oo qalabka kala-soocidda loo kala qaybin karo heer-kul hooseeya iyo heer-kul sarreeya. "Heerkulka sare" halkan wuxuu ku xiran yahay eber dhammaystiran, oo aad uga hooseeya qabowga. Saynisyahannadu waxay muddo dheer raadinayeen inay sare u qaadaan heer-kulka halista ah ee qalabka maaraynta, iyo rikoodhka ugu sarreeya ee heer-kul sarreeya ee heerkulka sare waa Mark Planck Institute's 203K (-70 ° C).
Sababtoo ah sifooyinkooda u adkaysi la'aanta eber-ka, qalabka superconducting waxay leeyihiin codsiyo badan oo ku saabsan soo saarista aagag magnet oo xoog leh, sida MRI iyo imaging magnetic resonance sawirka.
Hore: Budada Chromium budada, CrB2
Xiga: Hafnium Nitride Powder, HfN
Factory daawaha bir boride
Soo-saaraha Daawaha Birta ah
Warshado budada ka sameysan birta
Warshad budada ah oo bir ah
Soo-saaraha budada birta ah
Soosaarayaasha budada birta ah
Birta budada budada ah Qiimaha